🥇 ▷ Sharafta MagicBook Pro waxaa lagu majaajiloodaa shaashad buuxda iyo waxqabadka la xoojiyay ✅
Sharafta MagicBook Pro waxaa lagu majaajiloodaa shaashad buuxda iyo waxqabadka la xoojiyay
Huawei Honor sub-brand-ka ayaa ku dhawaaqay in shirkada laptop-ka cusub, ee loo yaqaan ‘Honor MagicBook Pro’, loo qorsheeyay in laga bilaabo Shiinaha. Shirkadda ayaa sidoo kale sii deysay fiidiyow fiidiyow ah oo xannibaya qaar ka mid ah astaamaha lagu yaqaan.
Fiidiyow fiaser ah oo uu wadaago Mudane, wuxuu ku andacoonayaa in aaladda ay lahaan doonto shaashad dhammaystiran, wax qabad sarreysa iyo miisaan aad u yar. Si kastaba ha noqotee, shirkadda weli ma aysan soo bandhigin astaamo kumbuyuutarradan mustaqbalka ah.
Bishii la soo dhaafay, daadka iyo warbixinnada dartiis, MagicBook Pro waxaa loogu talagalay in lagu qalabeeyo muuqaal 16.1-inji ah waxayna yeelan doontaa dhowr xulasho oo kuxiran qaabaynta processor-ka iyo xusuusta. Sida laga soo xigtay warbixinnada, waxay ku bilaaban doontaa processor Intel Core i5-8265U oo leh kaarka muuqaallada kale ee Nvidia MX250.
Huawei’s sub-brand-ka Honor wuxuu diraa codsiyada calaamadaha calaamadaha mustaqbalka ee casriga-taxanaha ah – 10X / 20X / 30X / 40X / 50X Xulashada Tifaftiraha: Huawei Honor sub-brand wuxuu dalbaneyaa calaamadaha ganacsiga ee mustaqbalka casriga ah ee X-Series – 10X / 20X / 30X / 40X / 50X
Waxaan fileynaa aaladda inay lahaato 8 GB oo RAM ah iyo 512 GB oo xusuusta ah. Aaladda sidoo kale waxay leedahay laba ku hadla labada dhinac ee keyboard-ka. Kamaradaha webka ayaa waliba lagu qariyey bartamaha furaha shaqada, oo la mid ah tii aan ku aragnay mooddadihii hore. Furaha korantada ee aaladda ayaa waliba lahaan doona qalabka sawirka faraha si loo adkeeyo amniga.
In kasta oo muuqaalka fiaser-ka ah ay sii deysay shirkad Shiinees ah, ma jiro wax macluumaad ah oo ku saabsan taariikhda rasmiga ah ee la bilaabay, qiimeynta, ama qaybaha la heli karo. Si kastaba ha noqotee, markii Honor uu bilaabay inuu shaashadda aaladda, furitaanka ayaa dhowaan dhici kara.
Madaxweynaha sharafta leh George Zhao wuxuu si rasmi ah u xaqiijinayaa Honor Smart TV kaas oo la bilaabi doono mustaqbalka dhow Xiga: Madaxweynaha sharafta leh George Zhao wuxuu si rasmi ah u xaqiijinayaa Honor Smart TV, oo dhowaan la bilaabi doono